Renaissance Philosophers နှင့်အတူလူသား၏သမိုင်း
ရှေးဟောငျးအီဂ Renaissance Philosophers လူ့သမိုင်း
ခေါင်းစဉ် "Renaissance Humanitarian သည်" ထိထိရောကျရောအလယ်ခေတ်အဆုံးသတ်နှင့်ခေတ်မီခေတ်သို့ဦးဆောင် 16 ရာစုနှစ်များစွာကနေတဆင့် 14 ကနေဥရောပတစ်လွှားသုတ်သင်သောအတွေးအခေါ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှလျှောက်ထားသည်။ Renaissance လူသား၏ရှေ့ဆောင်များကနေအရေးကြီးသောဂန္ထဝင်ကျမ်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ပြန့်ပွားအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့ကြသည် ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်လွှမ်းမိုးမှုကို၏ယခင်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်းဘုံခဲ့သောအရာကိုထက်အသက်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရူပါရုံကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထားတဲ့နှင့်ရောမမြို့။
Renaissance လူသား၏ဗဟိုအာရုံ, အတော်လေးရိုးရှင်းစွာလူ့သတ္တဝါဖြစ်ခဲ့သည်။ လူသားတွေဟာလူ့လိမ္မာပါးနပ်နှင့်လူ့အားထုတ်မှုထက်ဘုရားသခငျ့ကျေးဇူးတော်မှစွပ်စွဲခဲ့ပြီးသော၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုများအတွက်ချီးကျူးထောပနာခဲ့ကြသည်။ လူသားတွေဟာအနုပညာနှင့်သိပ္ပံများတွင်ပေမယ့်ပင်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုမဖွင့်, သူတို့ကလုပျနိုငျသောအရာကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကောင်းမြင်ကြည့်မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ လူ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝထက်အသင်းတော်များ၏ otherworldly အကျိုးစီးပွားရှိလူများအကြိုးရှိမညျဟုအလုပ်အပေါ်မှာပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့လူတွေကိုဦးဆောင် သာ. ကွီးမွတျအာရုံကိုပေးထားခဲ့သည်။
အဆိုပါ Renaissance ၏လူ့များအတွက် Starting Point သို့အီတလီနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်အဆိုပါခေတ်များ၏အီတလီမြို့ပြပြည်နယ်များအတွင်းရှိစီးပွားဖြစ်တော်လှန်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရှိနေခြင်းအားအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်အပန်းဖြေနှင့်အနုပညာတစ်ဇိမ်ခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့ထောက်ပံ့ထားကြောင်းတစ်ခါသုံးဝင်ငွေနှင့်အတူကြွယ်ဝသောတစ်ဦးချင်းစီ၏နံပါတ်တစ်ကြီးမားတဲ့တိုးရှိ၏။
အစောဆုံးလူသားဟာစာကြည့်တိုက်မှူး, အတွင်းရေးမှူး, ဆရာ, ဆရာမ, courtiers, ဤချမ်းသာကြွယ်ဝစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ကုန်သည်များ၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ထောက်ခံအနုပညာရှင်တွေခဲ့ကြသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, တံဆိပ် Literoe humaniores ကိုအသင်းတော်ရဲ့ကျောင်းသင်ဒဿန၏ Literoe sacroe မတူဘဲအတွက်ရောမမြို့ရဲ့ဂန္စာပေကိုဖော်ပြရန်မွေးစားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဖွင့်အဘို့သဘာဝအရပျကိုအီတလီနိုင်ငံလုပ်ရသောနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက် လူသားလှုပ်ရှားမှု ရန်၎င်း၏သိသာကွန်နက်ရှင်ခဲ့ ရှေးခေတ်ရောမမြို့ ။ Humanitarian သည်အလွန်အလယ်ခေတ်အတွင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၏ညှနျကွားအောက်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့သောအရာကိုတစ်ဦးကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဆနျ့ကငျြဘကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အားလုံးရသောတစ်ဦးဟာဒဿနိကဗေဒအတွက်တိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွား outgrowth, စာပေနှင့်ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံနှင့်ရောမသမိုင်း, ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလ၏အီတလီရှေးဟောင်းရောမရဲ့တိုက်ရိုက်သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရနှင့်အရှင်သူတို့ရောမယဉ်ကျေးမှု၏အမွေခံရသောသူဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည် - သူတို့လေ့လာပြီးနားလည်သဘောပေါက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ပြီးသောအမွေ။ ၏သင်တန်း, ဒီလေ့လာမှုအလှည့်အတွက်ကိုလည်းအတုယူဖို့ဦးဆောင်အရာ, လေးစားမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဤအဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်ရိုးရိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းရှာဖွေတာခံခဲ့ရသည်။ အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရခဲ့သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသော archives နဲ့စာကြည့်တိုက်များအတွက်နေရပ်ရင်းခဲ့ပါတယ်, လစျြလြူရှုခြင်းနှင့်မေ့လျော့ပြီ။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဤမျှလောက်များစွာသောအစောပိုင်းလူသားစာကြည့်တိုက်များ, ကူးယူနှင့်ဘာသာဗေဒနှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြကြောင်းရှေးဟောင်းစာမူရှာဖွေဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ်ကြောင်းသည်။ (အားလုံးနီးပါးရှေးဟောင်းလက်တင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှေးခေတ်ရောမမြို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့လူသားမှအကြီးအကျယ်ကြွေးဒါစုဆောင်းခဲ့ယခုလူသိများအလုပ်လုပ်တယ် 1430 ဖြင့်ဖြစ်စေ) cicero, Ovid, ဒါမှမဟုတ်ချရန်အားဖြင့်အကျင့်ကိုကျင့်ဘို့နယူးရှာဖွေတွေ့ရှိပါဝင်သူတို့အဘို့မယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ကြသည်။
ဤသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေဥစ္စာနှင့်သူတို့၏အတိတ်မှ link တစ်ခုကြောင့်နောက်တဖန်, ကပစ္စည်းတွေ့ထိန်းသိမ်းထားနှင့်အခြားသူများအားထောက်ပံ့ပေးခံရသောအစွမ်းကုန်အရေးပါမှု၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ - အချိန်ကျော်သူတို့လည်းရှေးခေတ်ဂရိကျင့်သောအကျင့်အပေါ်ပြောင်းရွှေ့ အရစ္စတိုတယ် , ပလေတို, အ Homer Epic နှင့်ပိုပြီး။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တူရကီနှင့် Constantinople, ရှေးဟောင်းရောမအင်ပါယာနဲ့ဂရိသင်ယူမှု၏ဗဟို၏နောက်ဆုံးခံတပ်အကြားဆက်လက်ပဋိပက္ခကြောင့်အလျင်အမြန်ခဲ့သည်။ 1453 ခုနှစ်, Constantinople အများအပြားဂရိတွေးခေါ်ရှင်၎င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်လူသားဝါဒစဉ်းစားတွေးခေါ်၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအားပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘယ်မှာအီတလီသို့ပြေးစေ, တူရကီတပ်ဖွဲ့များမှကျဆင်းခဲ့သည်။
Renaissance Humanitarian သည်ပညာရေးကိုအားပေးအားမြှောက်
၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ခုမှာအကျိုးဆက် လူသားအတွေးအခေါ် ဟာ Renaissance ကာလအတွင်းပညာရေး၏အရေးပါပုံကိုပေါ်တိုးလာအလေးပေးခဲ့ပါတယ်။
ပင်ရှေးဟောင်းစာမူနားလည်ရန်စတင်နိုင်ရန်အတွက်ရှေးခေတ်ဂရိနဲ့လက်တင်သင်ယူဖို့လိုအပ်ပြည်သူ့။ ဒါရှည်လျားခရစ်ယာန်ပညာရှင်များအားဖြင့်လျစ်လျူရှုခဲ့မှုအတွက်ခဲ့သောနောက်ဆုံးရှေးဟောင်းသိပ္ပံ - ဤ, အလှည့်အတွက်အဲဒီစာမူနှင့်အတူသွားလေ၏သောအနုပညာနှင့်အတွေးအခေါ်များအတွက်နောက်ထပ်ပညာရေးမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးပေါကျကှဲရာစုနှစ်ဥရောပတွင်တွေ့မြင်ဘာမှမတူဘဲအဆိုပါ Renaissance စဉ်အတွင်းရှိ၏။
အစောပိုင်းကဒီပညာရေးအပေါ်အဓိကအားများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းများ၏ယောက်ျားကန့်သတ်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာထိုအစောပိုင်းလူသားလှုပ်ရှားမှုတာကအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲရာတှငျအထကျတနျးလှာလေကြောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကျော်သို့သော်လေ့လာမှုများ၏သင်တန်းများကိုတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ပရိသတ်အတွက်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြသည် - အလွန်ပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကအလျင်အမြန်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်။ ဤအတူ, များစွာသောလုပ်ငန်းရှင်များယခင်ကဖြစ်နိုင်သောထင်ထက်အများကြီးကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အိုင်ဒီယာတစ်ခုဖြန့်ဝေရန်ဦးဆောင်တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပရိသတ်အတွက်ဂရိ, လက်တင်နှင့်အီတလီရှေးဟောင်းအတွေးအခေါ်နှင့်စာပေ၏ပုံနှိပ် edition မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းလူသား၏အရေးအပါဆုံးတစ်ခုမှာ Petrarch (1304-74), သူ့ကိုယ်ပိုင်နေ့ရက်ကာလ၌မေးမွနျးခံရခဲ့ပြီးသောခရစ်ယာန်အယူဝါဒနှင့်ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံနှင့်ရောမမြို့၏အတွေးအခေါ်များနှင့်တန်ဖိုးများကိုလျှောက်ထားသူအီတလီကဗျာဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အတော်များများက Dante (1265-1321) ၏အရေးအသားများနှင့်အတူလူသား၏အစအဦးအထိမ်းအမှတ်လေ့ဖြစ်သော်လည်း, Dante ဆက်ဆက်စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်လာမယ့်တော်လှန်ရေး presaged သော်လည်း, ကပထမဦးဆုံးကယ့်ကိုရွေ့လျားမှုအတွက်အမှုအရာသတ်မှတ်ထားသူကို Petrarch ဖြစ်ခဲ့သည်။
Petrarch ရှည်မေ့လျော့စာမူ unearth မှလုပ်ကိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ပါတယ်။
Dante မတူဘဲ, သူကဘာသာရေးနှင့်အတူမည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုစွန့်ပစ် ဘာသာရေး ရှေးခေတ်ရောမကဗျာနှင့်ဒဿန၏မျက်နှာသာအတွက်။ သူလည်းတစ်ဦးဂန္ယဉ်ကျေးမှုဆိုက်သကဲ့သို့မခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ဗဟိုအဖြစ်ရောမမြို့အပေါ်သို့အာရုံစူးစိုက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Petrarch ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုခရစ်တော်၏အတု, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ၏အခြေခံမူမဖြစ်သင့်ကြောင်းစောဒကတက် သီလ ရှေးတို့ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တရားနှင့်သစ္စာတရားကို။
များစွာသောလူသား Petrarch သို့မဟုတ် Dante နဲ့တူစာပေကိန်းဂဏန်းများကြပေမဲ့, များစွာသောအခြားသူများကိုလူသားစံနမူနာ၏ပြန့်ပွားကိုထောကျပံ့ကူညီပေးဖို့အာဏာနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာသူတို့ရဲ့ရာထူးကိုအသုံးပြုတဲ့သူကတကယ်တော့နိုင်ငံရေးအကိန်းဂဏန်းများရှိကြ၏။ Coluccio Salutati (1331-1406) နှင့်လီယိုနာဒို Bruni (1369-1444) ဥပမာ,, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စာပေးစာယူနဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာလက်တင် အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်တုပဖို့ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်သောစတိုင် Florence ၏အဓိပတိဖြစ်လာခဲ့သည် ဒါကြောင့်ဘုံလူမျိုး၏ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့အဖြစ်ဒါကြပါစေယင်းအတွက်ရေးသားဖို့ ပို. ပင်အရေးကြီးသောရှေး၏အရေးအသားများယူဆခဲ့သည်မီ။ သူတို့လို Salutati, Bruni နှင့်အခြားသူများကို Florence ရဲ့ရီပတ်ဘလီကန်အစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားနဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံမူရှင်းပြဖို့အခြားသူများနှင့်စာပေးစာယူမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်အတွက်စေ့စပ်နည်းလမ်းသစ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Renaissance Humanitarian သည်အကြောင်းကိုမှတ်မိဖို့အရေးအပါဆုံးအရာ, သို့သော်၎င်း၏အရေးပါဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများသည်၎င်း၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ယင်း၏နောက်လိုက်အတွက်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့၌စိတ်ဝိညာဉ်အားမုသာမသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Humanitarian သည်ကိုနားလည်စေရန်, လူ့လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေတဲ့အခမဲ့ open အသက်ရှုအဖြစ်မှတ်ခဲ့သည့်ဆန့်ကျင်အလယ်ခေတ်များ၏ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်းနှင့် scholasticism နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ရမည်ဖြစ်သည်။
တခါတရံမှာ Humanitarian သည်ရှေးခေတ်အယူမှားဝါဒမှအတော်လေးနီးစပ်သည်ထင်ရှားပေမယ့်ဒီပုံမှန်အားဖြင့်လူသား၏ယုံကြည်ချက်အတွက်မွေးရာပါဘာမှထက်အလယ်ခေတ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဖို့နှိုင်းယှဉ်ပိုအကျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထို Anti-ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဟာလူသားဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘုရားကျောင်းစိတျ, ဂရုမစိုခဲ့ဘူးဆိုတပါးသောဘုရားတို့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ဝေးနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအရာတစုံတခုထံမှဘူးသောသူတပါးသောဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုသူတို့ဖတ်ရှုခြင်းရှေးခေတ်စာရေးဆရာတစ်ဦးကတိုက်ရိုက်ရလဒ်ခဲ့ကြသည် အဆိုပါလူသားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းအအတွင်းရေးမှူး, ဂိုဏ်းအုပ်, Cardinal နှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး (က Nicholas V ကို, Pius II ကို) ၏ပင်စုံတွဲတစ်တွဲ - ဒါဟာဤမျှလောက်များစွာသောကျော်ကြားလူသားကိုလည်းဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်း, ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်းစပ်စုသည်။ ဤရွေ့ကားစက္ကမင်မင်္နှင့်ဘာသာရေးထက်စာပေ, အနုပညာနှင့်ဒဿနအတွက်အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုပြ, အစားဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်များထက်လောကရှိကြ၏။ Renaissance လူ့အဖှဲ့အစညျးနှငျ့မဆကျဆံကျန်ရစ်ရသောအတှေးအချေါနဲ့ခံစားချက်အတွက်တော်လှန်ရေး, ခရစ်ယာန်ဘာသာမပင်အမြင့်မားဆုံးအဆင့်မရောက်ခဲ့ပါ။
အတည်ပြုချက်ဘက်လိုက်မှု: ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်အတွက်အပြစ်အနာအဆာများနှင့် Arguments
'' မှတ်သားပြီးနောက် Ball ကို 'နဲ့' ဟာဂေါက်သီးဘောလုံးမှတ်သားနေပါသည် ''
ပီကာဆိုရဲ့အမျိုးသမီးများနေ့: ဇနီး, မိတ်ဆွေတို့ကိုနှင့်မူဆယ်မြို့
Plesiosaurus, အ Long-လည်ပင်းအဏ္ဏဝါတွားသွားသတ္တဝါ
'' Semper Libera '' Lyrics နှင့်စာသားဘာသာပြန်စာပေ
အားလုံး Narnia နှင့်စာရေးဆရာ CS Lewis ကများ၏ရာဇဝငျခြုအကြောင်း
"အာရုံစူးစိုက်မှု" (အာရုံစူးစိုက်) Conjugate လုပ်နည်း
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Heinkel သူ 280
လူနေထိုင်ရာ Spaces များအတွက်အခန်းအားဖြင့် Ergonomics Lighting Levels
အဆင့်မန်နေဂျာများအတွက်အသုံးဝင်သော Form များ: သင်္ကေတပြ-in ကို Sheet များ မှစ. စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းပေးရန်
လီယိုနာဒို Pisano Fibonacci: တစ်ဦးက Short အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါသမုဒ္ဒရာထဲကိုသင် Kill နိုင်သလားဒါက (ငါးမန်းအပြင်)9အရာ
ယောဟနျသ Galsworthy အားဖြင့်အရည်အသွေး,